जब डाक्टरहरुले अमिताभ बच्चनलाई मृत घोषणा गरे, त्यसपछि…. — Imandarmedia.com
जब डाक्टरहरुले अमिताभ बच्चनलाई मृत घोषणा गरे, त्यसपछि….
एजेन्सी। बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएपछि मुम्बइको नानावटी अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उनको हालत स्थिर रहेको र अक्सिजन लेभल पनि सामान्य रहेको बताइएको छ।
३८ वर्ष पहिले पनि जुलाइकै महिना थियो जब अमिताभ गम्भीर रुपले घाइते भएका थिए र उनलाई ६२ दिनसम्म अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । यो दुर्घटना २४ जुलाइ १९८२ मा बैंगलोरमा भएको थियो।
फिल्म ‘कुली’को एक द्वन्द्वको दृश्यको सुटिङ भइरहेका बेला पुनित इस्सरको मुक्का अमिताभको अनुहारमा लागेपछि उनी टेबलमाथि लडेका थिए । कुली २ डिसेम्बर १९८३ मा रिलिज भएको थियो। यो दृश्यको लागि बडी डबलको सहारा लिने कुरा भएको थियो ,
तर दृश्य वास्तविक लागोस् भनेर अमिताभले आफैं गर्ने निर्णय गरेका थिए। सिन पूरै वास्तविक देखियो, उपस्थितले ताली बजाए, अमिताभ मुस्कुराए। तर, त्यही बेला उनको पेटमा पीडा सुरु भयो। टेबलको एक कुना अमिताभको पेटमा नराम्रोसँग लागेको थियो।
सबैलाई यो सामान्य चोट लागेको थियो किनकि रगतको थोपा पनि बगेको थिएन। अमिताभ होटलमा आराम गर्न गए तर पीडा कम भएन। भोलिपल्ट पीडा झनै बढेपछि उनलाई अस्पताल लगियो।
एक्स–रे गरियो तर डाक्टरले केही पत्ता लगाउन नसकेपछि उनलाई निद्राको औषधि दिएर सुताइयो। खबर पाएपछि आमा तेजी, पत्नी जया र भाइ अजिताभ बैंगलोर पुगे। उनीहरु अमिताभलाई मुम्बइ ल्याउन चाहन्थे तर डाक्टरले अनुमति दिएनन्।
तेस्रो दिन २६ जुलाइमा अमिताभको हालत झनै बिग्रियो। यही बीच भेलोरका चर्चित सर्जन एचएस भट्ट केही कामले अस्पताल आएका थिए । फिल्म युनिटले उनीसँग आग्रह गरेपछि उनी अमिताभको केस स्टडी गर्न तयार भए।
रिपोर्ट हेरेपछि उनले त्यस दिन औषधीले सुधार नभए भोलिपल्ट अपरेशन गर्नुपर्ने बताए। २७ जुलाइ १९८२ मा डाक्टरहरुले अपरेशन गर्ने निर्णय गरे। उनीहरुले पेट चिरेर हेर्दा चकित परे। अमिताभको पेटको झिल्ली फाटिसकेको थियो। सानो अमाशय पनि फुटेको थियो।
यो स्थितिमा कुनै पनि मानिस ३ देखि ४ घण्टा जीवित रहन कठिन हुन्छ । तर अमिताभ ३ दिनसम्म यो स्थितिबाट गुजिएका थिए। त्यतिबेला अमिताभलाई अरु रोग पनि थिए। उनी दमका रोगी थिए, कमलपित्तले एउटा मृगौला खराब भइसकेको थियो र मधुमेह पनि थियो।
अपरेशनको भोलिपल्ट अमिताभलाई निमोनिया पनि भयो। उनको शरीरमा विष फैलिँदै गएको थियो, रगत पनि पातलो भएको थियो। रगतको घनत्व सुधार्न बैंगलोरमा सेल्स नभएकाले मुम्बइबाट मगाइयो।
रगतमा सेल्स मिलाएपछि अमिताभको स्थिति ४ दिनमा पहिलो पटक सुध्रिएको थियो तर भोलिपल्टै पुनः बिग्रियो। डाक्टरहरुले सल्लाह गरेर राम्रो उपचारका लागि मुम्बइ लैजानु नै ठिक हुने निर्णय गरे। एयरबसको माध्यमबाट उनलाई मुम्बइ पुर्याइयो।
उनलाई ब्रीच क्याण्डी अस्पतालमा राखियो ।१ अगष्टमा निकै सुध्रिएको अमिताभको हालत २ अगष्टमा फेरि बिग्रियो। शरीरमा लगातार विष फैलिइरहेको थियो। डाक्टरका अनुसार फेरि अपरेशन गर्नु जरुरी भएको थियो।
३ घण्टाको अपरेशनपछि डाक्टरहरुले अमिताभको हालत निकै नाजुक भएको बताए। डाक्टरहरुले उनलाई औषधीको साथमा प्रार्थताको आवश्यकता भएको बताए। अमिताभको स्थिति लगातार बिग्रिइरहेको थियो । उनलाई सास फेर्न कठिनाइ हुन थाल्यो।
डाक्टरले सास फेर्न कृत्रिम नली लगाए । त्यसपछिका केही दिन अमिताभको हालतमा उतारचढाव आयो। सामान्यदेखि विशेष व्यक्तिसम्म उनलाई रगत दिन तयार थिए। पुनित इस्सरकी पत्नी, शम्मी कपूरकी छोरी, परवीन बबीसहित २ सय जनाको रगत अमिताभलाई चढाइएको थिय।
डाक्टरले त यहाँसम्म भनेका थिए कि अब कुनै चमत्कारले मात्र उनलाई बचाउन सक्छ। यससँगै देशभर अमिताभको स्वास्थ्यलाभको लागि प्रार्थना सुरु भयो। मन्दिरमा हजारौंको भीड जम्मा भयो। अमिताभको स्वास्थ्यलाभको लागि मन्दिर पुगेको भीड नियन्त्रण गर्न भारी मात्रामा पुलिस तैनाथ गर्नु परेको थियो।
२ अगष्टमा भएको अपरेशनको ३ दिनपछि अमिताभको हालत सुधार हुन थाल्यो। ८ अगष्टमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र सोनिया गान्धी उनलाई भेट्न दिल्लीबाट मुम्बइ पुगिन्। अमिताभको अमाशयले काम गर्न सुरु गरेको अनुमान गरिएको थियो तर पूरै खतरामुक्त घोषित गर्न अझै पर्खिनुपर्ने डाक्टरले बताएका थिए।
हालत सुधार भएपछि अमिताभ करिब डेढ महिना डाक्टरको निगरानीमा अस्पतालमै बसे । २४ सेप्टेम्बरमा अन्ततः अमिताभलाई डिस्चार्ज गरियो। ठिक भएपछि प्रशंशकहरुलाई धन्यवाद दिँदै अमिताभले भनेका थिए ‘जीवन र मृत्युको बीचमा यो एक भयावह अग्नी परीक्षा थियो।
दुई महिनाको अस्पताल बास र मृत्युसँगको लगाइँ समाप्त भएको छ। अब म मृत्युमाथि विजय पाएर घर फर्किंदैछु ।’ घर पुगेपछि अमिताभले हात हल्लाएर आफ्ना शुभचिन्तकप्रति आभार व्यक्त गरे।
यो वास्तविक दृश्यलाई नै फिल्म कुलीको अन्तिम दृश्यको रुपमा प्रयोग गरियो। एक अन्तरवार्तामा त्यो स्थितिको खुलासा गर्दै अमिताभले भनेका थिए ‘डाक्टरहरुले मलाई चिकित्सकीय रुपमा मृत घोषित गरेका थिए। जया आइसीयू कोठाबाहिर उभिएर सबै हेरिरहेकी थिइन्।
डाक्टरहरुले कोसिस बन्द गरेका थिए। त्यही बेला जया अचानक चिच्याइन् कि मैले भर्खरै उहाँको खुट्टाको औला हलिलएको देखेकी छु कृपया कोसिस गर्दै रहनस्। डाक्टरहरुले मेरो खुट्टाको मालिश गर्न सुरु गरे अनि मभित्र फेरि प्राण आयो।